April 28, 2015 Updated: April 29, 2015 9:57 a.m.
1of4Meseka Henry, pictured Monday, April 27, 2015, in San Francisco, Calif. Henry is a MUNI bus driver who says she was stopped by police officers, arrested and violently handled which resulted in serious bruising. She was charged with resisting arrest.Santiago Mejia/The ChronicleShow MoreShow Less
2of4Meseka Henry, pictured Monday, April 27, 2015, in San Francisco, Calif. Henry is a MUNI bus driver who says she was stopped by police officers, arrested and violently handled which resulted in serious bruising. She was charged with resisting arrest.Santiago Mejia/The ChronicleShow MoreShow Less
3of4Meseka Henry, pictured Monday, April 27, 2015, in San Francisco, Calif. Henry is a MUNI bus driver who says she was stopped by police officers, arrested and violently handled which resulted in serious bruising. She was charged with resisting arrest.Santiago Mejia/The ChronicleShow MoreShow Less
4of4Meseka Henry, pictured Monday, April 27, 2015, in San Francisco, Calif. Henry is a MUNI bus driver who says she was stopped by police officers, arrested and violently handled which resulted in serious bruising. She was charged with resisting arrest.Santiago Mejia/The ChronicleShow MoreShow Less